Sat, Jul 4, 2020 at 1:30am
काठमाडौँ, ८ जेठ मे ३० देखि जुलाई १४ सम्म इंग्ल्याण्डमा एकदिवसीय विश्वकपको बाह्रौं संस्करण आयोजना हुने गईरहेको छ । ‘विश्वकप विशेष’ मा हामीले यसपटक विश्वकप क्रिकेट इतिहासमा सर्वाधिक विकेट लिने ५ खेलाडीको सुची प्रस्तुत गरेका छौँ। अघिल्लो पटक हामीले यस्या खेलाडिहरुको बारेमा लेख लेखेका थियौँ जसले यस विश्वकपलाई आफ्नो अन्तिम विश्वकप बनाउँदैछन् । एकदिवसीय विश्वकप इतिहासमा सबैभन्दा धेरै विकेट लिने ५ बलर ५. जाहिर..
एजेन्सी, ७ जेठ । एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको १० दिन अगाडी पाकिस्तानले आफ्नो राष्ट्रिय खेलाडीको घोषणा गरेको छ । फास्ट बलर वहाब रियाज र मोहम्मद आमिरलाई १५ सदस्यीय टोलीमा समावेश गरेको छ । टोलीमा पाकिस्तानले ४ परिवर्तनहरू गरेको छ । यसअघि १८ अप्रिलमा घोषणा गरिएको टोलीमा आमिर र रियाज दुबै अटाएका थिएनन् । आमिरलाई रिजर्व खेलाडीका रूपमा भने राखिएको थियो । पाकिस्तानले..
एजेन्सी, ६ जेठ । स्पेनिस ला लिगा फुटबल च्याम्पियन बार्सिलोनाले यो सिजनको अन्तिम खेलमा एइबरसँग २-२ गोलको बराबरी गरेको छ । आइतबार राति भएको लिगको अन्तिम खेलमा बार्सिलोनाका लागि स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीले २ गोल गरेका थिए । ती दुबै गोलहरू दुबै टोलीले खेलको पहिलो हाफमा गरेका थिए । हिजोको खेलमा पहिलो अग्रता एइबरले खेलको २० औँ मिनेटमा मार्क कुकुरियलको गोलबाट लिएको थियो । त्यसपछि..
काठमाडौँ, ५ जेठ १२ औं संस्करणको आईसीसी विश्वकप क्रिकेट आउन अब केहि हप्ता मात्र बाँकी रहेको छ । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा आयोजना हुने विश्वकपमा केहि खेलाडीले आफ्नो अन्तिम विश्वकप खेल्दैछन् । खेलाडी जीवन औषतमा १० देखि १२ वर्षको रहने हुँदा क्रिकेटको महाकुम्भ विश्वकप खेल्न पाउने खेलाडीलाई निकै यादगार तथा गर्वको बिषय हुन्छ । हालसम्म भारतका महान खेलाडी सचिन तेन्दुलकर र पाकिस्तानका जाभेद मियादले..
तौलिहवा, ३ जेठ । बुद्ध जयन्तीको अवसरमा गौतमबुद्धको गृहनगर कपिलवस्तुमा मिनी म्याराथन दौड प्रतियोगिता शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतमले ज्ञान प्राप्त गरेपछि पहिलो पटक आफ्ना मातापितालाई भेट गरेको प्राचीनस्थल निग्रोधाराम (कुदान) बाट जिल्ला प्रशासन चोकसम्म करीब ४ किमीसम्म धावकहरु सहभागी भएका थिए । प्रतियोगितामा विद्यालयतर्फबाट वाणगङ्गा मावि लौगाइका अजय पाण्डे पहिलो, कनकमुनि मावि जगदीशपुरका श्यामसुन्दर यादव दोस्रो र कपिलवस्तु..
काठमाडौँ, २ जेठ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका चारजना युवा खेलाडीहरु सन्दिप लामिछाने, सोमपाल कामी, रोहित कुमार पौडेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरी क्यारेबियन प्रिमिएर लिग (सिपिएल) को ड्राफ्टमा परेका छन् । सिपिएलले आज सार्वजनिक गरको २० देशका ५३६ खेलाडीको सुचीमा सन्दिपसँगै अलराउण्डर दिपेन्द्र, मध्यक्रमका ब्याट्म्यान रोहित र तिब्र गतिका बलर सोमपालको नाम आएको हो । युवा लेग स्पिनर सन्दिपले गतवर्ष सन्दीपले सेन्ट किट्स एण्ड..
काठमाडौं, १ जेठ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले मंगलबार १० लाख रुपैयाँ पर्र्नेे स्पोर्ट्स बाईक किनेका छन् । भारतमा आइतबार सम्पन्न इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट खेलेर भर्खर स्वदेश फर्किएका सन्दीपले बिएमडब्लु ब्राण्डको जी ३१० मोडलको महंगो बाइक किनेका हुन् । सन्दीपले सामाजिक संजाल इन्स्ट्राग्राममा बाइकसँगको तस्विर पोस्ट् गर्दै आफ्नो परिवारमा नयाँ सदस्य थपिएको उल्लेख गरेका छन् । सन्दीपले..
काठमाडौँ, ३१ वैशाख नेपाल क्रिकेट संघ माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने सङ्केत देखिएको छ । चार जिल्ला क्रिकेट सङ्घले आगामी जेठको तेस्रो साताभित्र नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन गर्ने भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी)ले गठन गरेको स्वतन्त्र कमिटीको निर्णय अनुसार चारै जिल्लाले साधारणसभा गर्ने भएका छन् । निर्वाचन गराउने जिल्लामा चितवन, महोत्तरी, सप्तरी र दाङ छन् । चितवनले अगामी जेठ ४, महोत्तरीले जेठ ११,..
काठमाडौँ, ३१ वैशाख । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को सिजन १२ सकिएको छ । फाइनलमा मुम्बईले चेन्नाईलाई एक रनले पराजित गरेर उपाधि जित्यो । तर यो रोमाञ्चक खेलको एक यस्तो कहानी बाहिर आएको छ जसलाई सुनेर हरेक क्रिकेट प्रेमीले गर्व गर्नेछ । चेन्नाईका ब्याट्सम्यान शेन वाटसनले फाइनलमा ८० रनको बेजोड पारी खेलेपनि आफ्नो टीमलाई जिताउन सकेनन् । वाटसनका साथी क्रिकेटर हरभजन सिंहले खुलासा गरेका छन्..
काठमाडौं, ३० वैशाख । निर्धारित समय भन्दा डेढ वर्ष ढिला भइसकेको र थप ढिलो हुन सक्ने आशङ्का माझ सरकारले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग गेम्स) को प्रतिक चिन्ह (लोगो) र मस्कट सार्वजनिक भएको छ । ६ महिनापछि काठमाडौं र पोखरामा आयोजना हुने तय भएको दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो खेल महोत्सबको तयारी शुरु नभएको भन्दै आलोचना हुन थालेको बेला युवा तथा..
काठमाडौं, ३० वैशाख इंगलिश प्रिमियर लिग फुटबलमा लगातार दोस्रो पटक म्यान्चेस्टर सिटीले उपाधि जितेको छ । लिगको अन्तिम खेलमा आइतबार राति ब्राइटनलाई ४–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै सिटीले उपाधि जितेको हो । सिटीलाई ब्राइटनको मैदानमा जिताउन सर्जियो अगुएरो, आइमेरिक लापोर्ते, रियाद महरेज र इल्काये गुन्डोगानले १–१ गोल गरे । ग्लेन मुरेले खेलमा ब्राइटनका लागि सुरुआती अग्रता दिलाएका थिए । सिटीले जितसंगै ९८ अंकसहित..
हैदराबाद, ३० बैशाख । भारतमा जारी १२ औं संस्करणको इण्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलको उपाधि चौंथोपटक मुम्बई इंडियन्स्ले जितेको छ । आइतबार हैदराबादको राजीव गान्धी स्टेडियममा चेन्नई सुपरकिंग्ससँग भएको रोमाञ्चकपूर्ण खेलमा १ रनले मुम्बई बिजेता बनेको हो । यससँग ८ हप्तासम्म चलेको यसपटकको आइपीएल सिजन सकिएको छ । भारु २० करोड पुरस्कार बिजेता टोली ले भारु २० करोड पायो भने उपविजेता रहेको ले साढे १२..
काठमाडौँ, २९ वैशाख । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटकाे अहिले भइरहेको फाइनलमा मुम्बई इन्डियन्सले चेन्नई सुपर किङ्सलाई १५० रनको लक्ष्य दिएको छ । बलिङतर्फ चेन्नईका दीपक चाहरले तीन तथा शार्दुल ठाकुर र इमरान ताहिरले समान दुई–दुई विकेट लिए । हैदराबादको राजिब गान्धी इन्टरनेशनल स्टेडियममा भइरहेको खेलमा टस जितेर पहिले व्याटिङ गरेको मुम्बईले निर्धारित २० ओभरमा आठ विकेटको क्षतिमा १४९ बनाएको हो । उसका लागि..
काठमाडौं, २९ वैशाख सन्दीप लामिछाने १२ औँ आईपीएल क्रिकेट खेलेर आईतबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन्। दिल्लीले खेलेका १६ मध्ये ६ खेलमा मात्र अवसर पाएका सन्दीपले त्यसमा ८ विकेट हात पारे। जसमा उनको इकोनोमी ९.१३ र एभरेज २६.२५ रहेको थियो । उनले जारी आईपीएलमा अन्तिमपटक रोयल च्यालेन्जर्स बेग्लोरविरूद्ध खेलेका थिए । जुन खेलमा महँगो सावित भएका सन्दीपले ३ ओभर बलिङ गर्दै ३६ रन खर्चिएका..
चितवन, २९ वैशाख । रामपुरमा निर्माण गर्न थालिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा पुसबाट प्रतियोगिता गर्न सकिने गरी कामलाई अघि बढाइएको छ । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले माघ १६ गते भरतपुर महानगरपालिकासँग रङ्गशाला निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)ले आज यहाँ पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै रकम उठ्न सकेमा पुस महीनासम्ममा मैदानको काम सम्पन्न गरी खेल खेल्न सकिने बताउनुभयो । कामलाई तीव्रता..
एजेन्सी, २९ वैशाख रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आइस हक्कीको प्रदर्शनी खेलमा भाग लिए। शुक्रबार राति भएको खेलमा आइस हक्कीको राष्ट्रिय लिगका पूर्वखेलाडी सम्मिलित टोलीबाट खेल्दै ६६ वर्षीय पुटिनले त्यस खेलमा आठ गोल गर्न सफल भए। उनी सम्मिलित टिम १४-७ ले विजयी भयो। जब उनको टिम विजयी भयो, त्यसश्चात खुसीयाली मनाउनको लागि उनी मैदान घुम्दै थिए। तर अचानक उनी लडे। चिप्लिएर लडेपछि उनी हत्तपत्त..
नयाँ दिल्ली, २८ बैशाख । भारतमा जारी आइपीएलको क्वालीफायर अन्र्तगतको खेलमा महेन्द्र सिंह धोनी नेतृत्वको चेन्नाईले दिल्लीलाई ६ विकेटले हराउँदै यस सिजनको फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ । दिल्लीका तर्फबाट नेपालका बलर सन्दीप लामिछानेले यस पटक पनि खेल्ने अवसर पाएनन् । चेन्नाईले भने मुरली बिजयको स्थानमा शार्दुल ठाकुरलाई ल्याएको थियो । शुक्रबारको खेलमा दिल्लीका बलरहरु चेन्नाईसामु निरिह सावित भए । यस नतिजासँगै..
काठमाडौं, २७ वैशाख । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेशका लागि शुक्रबार दिल्ली क्यापिटल्सले चेन्नाई सुपर किंग्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । भारतीय राष्ट्रिय टिमको कप्तानी सम्हालिसकेका महेन्द्रसिंह धोनीको चेन्नई र गत सिजनमा आधादेखि दिल्लीको कमाण्ड पाएका श्रेयस अएरको दिल्ली क्यापिटल्सबीच आजको खेलमा पाको अनुभव र नवीन जोशबीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ। उमेर छँदा भारतीय टोलीबाट धेरै अनुभवी खेलाडीलाई यूवाद्वारा प्रतिस्थापन गराएका धोनी उमेर ढल्किन थालेपछि..
काठमाडौँ, २७ वैशाख । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)ले १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता (साग)लाई लक्षित गरी खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने भएको छ । नेपालमा आयोजना हुने १३औँ संस्करणको दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता (साग) को तयारीका लागि हालै सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई समावेश गरी बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने निर्णय भएको राखेपले जनाएको छ । प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीलाई जेठ पहिलो..
आम्स्टरड्याम, २६ बैशाख । बेलायती फुटबल क्लब टोटेनह्याम हट्सपर युरोपेली फुटबलको प्रतिष्ठित प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । इतिहासमा पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको टोटेनह्यामलाई फाइनलमा पुर्याउन लुकास मौराले डच टीम आयाक्स विरुद्ध ह्याट्रिक गरेका थिए । सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा एक गोलको अग्रता बनाएको आयाक्सले दोस्रो लेगमा पनि शुरुमै दुई गोल गरेर समग्र अग्रता ३–० बनाएको थियो । विजयको नजिक पुगेर फाइनलमा..
पशुपतिनगर, २६ वैशाख इलाममा कराँते खेल शुरु भएको ३० वर्षभन्दा बढी भए पनि कर्वड हल नबन्दा खेलाडी र प्रशिक्षकलाई समस्या भएको छ । कर्वड हल अभावमा एक हजार २०० भन्दा बढी कराँते खेलाडीले खुला चौरमा प्रशिक्षण लिनुपरेको छ । पूर्वाधार अभावमा जिल्ला सदरमुकाममा अयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि खुला चौरमा हुँदै आएको छ । सदरमुकाम इलाम बजारको प्रशिक्षण कक्ष सानो छ ।..
एजेन्सी, २६ वैशाख दिल्ली क्यापिटल्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलको फाइनल नजिक पुगेको छ । एलिमिनेटर खेलमा दिल्लीले सनराइजर्स हैदरावादलाई २ विकेटले हरायो । टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको हैदरावादले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै एक सय ६२ रन बनायो । उसका लागि मार्टिन गुप्टिलले ३६ तथा मनिश पाण्डेले ३० रन बनाए । यस्तै कप्तान केन विलियम्सनले २८ र विजय शंकरले २५..
एजेन्सी, २५ वैशाख । भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्स र सनसाइजर्स हैदरावादबिचको खेल सुरु भएकाे छ । सनसाइजर्स हैदरावादले ८ ओभरमा २ विकेटगुमाएर ६५ जोडेको छ । आजको खेलमा विजयी हुने टोली फाइनल प्रवेशका लागि चेन्नई सुपर किङ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने पराजित हुने टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरिने छ । यस्तै नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आज पनि दिल्लीको प्लेइङ–११ मा परेका..
काठमाडौँ, २५ वैशाख २०औँ राष्ट्रिय पुरुष खुला तथा १३ औँ राष्ट्रिय महिला तौल समूह फुलकन्टयाक्ट कराँते प्रतियोगिता यही वैशाख २७ र २८ गते हुने भएको छ । नेपाल क्योकुसिन कराँते डो सङ्घको आयोजनामा हुने दुई दिने प्रतियोगिता त्रिपुरेश्वरस्थित मिनी कभर्ड हलमा सञ्चालन गर्ने प्रतियोगिता आयोजक समितिका संयोजक पुष्प मानन्धरले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगितामा सातवटै प्रदेशबाट गरी पुरुषतर्फ ८५ र महिलातर्फ ३८ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा..
काठमाडौं, २५ वैशाख मुम्बई इन्डियन्स जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार राति भएको खेलमा मुम्बईले डिफेन्डिङ च्याम्पियन चेन्नाई सुपर किंग्सलाई उसैको घरेलु मैदानमा ६ विकेटले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो । १३२ रनको सामान्य चुनौती पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको मुम्बईले १८.३ ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेटायो । मुम्बईको जितमा सुर्यकुमार यादव नायक बने । उनकै..
काठमाडौं, २४ वैशाख नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाएको झण्डै दुई वर्षपघि घरेलु मैदानमा त्रिकोणात्मक खेल्न पाउने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले मंगलबार क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग–२ को तालिका सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार माघ २२ देखि २९ सम्म (फेब्रअरी ५–१२) सम्म नेपाल, ओमान र अमेरिकाबीच त्रिकोणात्मक सिरिज हुनेछ । यो खेल त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा हुनेछ । तीन वर्षमा ३६ खेल आईसीसीले एकदिवसीय मान्यता..
Results 1924: You are at page 25 of 65